Iscam : maro ny orinasa mitily ireo nahavita fianarana | NewsMada
Iscam : maro ny orinasa mitily ireo nahavita fianarana
Feno 25 taona ny sekoly ambony amin’ny fitantanana sy ny fandraharahana, Iscam. Nivoaka ny 1 septambra koa ny andiany faha-25 nisalotra ny anarana “Misandratra”. Miisa 287 mianadahy izy ireo, avy ao amin’ny taona fahatelo (licence 3) ny 199 ary avy amin’ny taona fahadimy (masters II) ny 88.
Anisan’ny mampiavaka ny sekoly Iscam ny fiarahany miombon’antoka amin’ny orinasa maro eto Madagasikara. Nambaran’ny PDG-n’ny orinasa Socota, Salim Ismaïl, fa tsy mahakasika ny sekoly ihany ny lafiny fitantanana sy fitarihana orinasa (Management), fa mahaliana sy tena ilain’ny orinasa, satria ahazoan’izy ireny tombontsoa ny fananana mpiasa manana fari-pahaizana amin’izany.
Maherin’ny 10.000 ny efa niofana
Nilaza ny tompon’andraikitry ny fifandraisana ao amin’ny sekoly Iscam, fa maro amin’ireo mpianatra ao amin’ny taona fahadimy, mianatra sady efa miasa any amin’ny orinasa. Tafiditra ao anatin’ny paikady vaovao hampiharina ny hanovana ny fomba fampianarana an-databatra sy ny fampiharana. Maherin’ny 3.000 ny mpianatra nivoaka tao aminy, ary mihoatra ny 10.000 ny nandrato fiofanana mandritra ny fotoana fohy na lava.
Anisan’ny fiaraha-miombon’antoka ataon’ity sekoly ity amin’ny orinasa tsy miankina matanjaka maro eto amintsika, ny fandraisana ny mpianatra asa any amin’izy ireny.
Reny mpiahy ity andiany “Misandratra” ity Rtoa Ramakavelo Hanta. Mpianatra mendrika amin’ireo mendrika (major des majors), Rtoakely Rakotondrabary Avotra Nirina, mpianatra taona fahatelo, ao amin’ny fitantanam-bola sy ny vola (comptabilité et finances).